सिल्टलले एउटा वेब स्क्रैपिंग सेवाको सुझाव दिन्छ
वेब स्क्रेटर र क्रल गर्ने प्रक्रिया घटाउनुहोस्. तिनीहरू पायथन, जावा, रूबी, सी ++ र अन्य प्रोग्रामिंग भाषाहरूमा बनाइएका छन् र यसलाई डेटा निकाट वा वेब क्यान्डर्स भनिन्छ।. यहाँ हामीले इन्टरनेटमा सर्वश्रेष्ठ वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयरको व्यापक सूची साझेदारी गरेका छौं.
स्क्रैपबक्स न केवल एक वेब स्क्रैपर तर एक व्यापक एसईओ उपकरण पनि. एसईओ कम्पनीहरु, फ्रीलान्सरहरू र वेबमास्टरहरूको लागि यो उपयुक्त छ; केहि अद्वितीय विशेषताहरु को खोज इन्जिन क्रलिंग, खोजशब्द फसलिंग, प्रोक्सी फसलिंग, टिप्पणी पोस्टिंग, र लिंक चेकिंग हो. साथै, यस उपकरणले पृष्ठ पङ्क्ति जाँच गर्दछ, आरएसएस फीडहरू सिर्जना गर्दछ, ईमेल ठेगानाहरू निकाल्छ, अनियोजित डोमेनहरू फेला पार्छ, र दशौं कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ।. स्क्रैपबक्स व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुवै प्रयोगका लागि उपयुक्त छ.
यो वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर एकदम केहि समय को लागी भएको छ. आयात गर्नुहोस्. io ले तपाइँले केहि पृष्ठहरूसँग उपयुक्त एपिआईमा वेब पृष्ठहरू बदल्न अनुमति दिन्छ. वेबबाट जानकारी निकाल्न तपाईंलाई यो सजिलो बनाउँछ. यसमा धेरै सुविधाहरू छन् र एकैसाथ जटिल र सरल साइटहरू दुवैलाई सम्भाल्न सक्छ.
iMacros इन्टरनेट मा सबै भन्दा राम्रो डेटा एक्सचेंजहरु मध्ये एक हो।. यसले तपाईंलाई सङ्कलन गर्न अनुमति दिन्छ र (2 9) स्क्रैप डाटा तपाईंको आवश्यकता अनुसार. यो उपकरणले पाठ, चित्रहरू, र भिडियोहरू परीक्षण र डाउनलोड गर्दछ. IMacros संग, तपाईं XML र CSV फाइलहरूमा जानकारी आयात गर्न वा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ. यो व्यवसायी र उद्यमहरुको लागि उपयुक्त छ र एकै समयमा धेरै कार्यहरू गर्दछ.
स्क्रैप सबै भन्दा प्रसिद्ध वेब स्क्रैपिंग सेवाहरु मध्ये एक हो।. यो उच्च स्तरको वेब क्रलर हो, जुन विभिन्न वेबसाईट र ब्लगहरूको जानकारी संरचना र व्यवस्थित गर्न प्रयोग गरिन्छ. यसको केहि प्रसिद्ध कार्यहरू डाटा प्रोसेसिंग, सूचना खनन र ऐतिहासिक अभिलेखहरू हुन्. यसले तपाईंलाई यसको राम्रो परिभाषित API बाट लाभ उठाउन र तपाईंको कामलाई सजिलो बनाउँछ.
मोजांडा सानो, मध्यम र ठूला आकारको व्यवसायका लागि उपयुक्त छ. यो एक शक्तिशाली वेब स्क्रैपर छ र विभिन्न वेब पृष्ठहरू सजिलै संग सामग्री कब्जा गर्दछ. मोजेडाको साथ, तपाईं जानकारी सङ्कलन र प्रभावकारी ढंगमा जानकारी व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ. यसको क्लाउड-आधारित आर्किटेक्चरले तीव्र तैनाती, र हदसम्म स्केलेटिभलाइ सुनिश्चित गर्दछ. यो कुनै मर्मतको आवश्यकता छैन र एक घण्टामा बहु कार्यहरू गर्न सक्दछ.
प्रोप्टक्लड यसको अनुकूलित वेब स्क्रैपिंग र क्रलिंग सुविधाहरु को लागि जानिन्छ. यसले तपाइँलाई 130 भन्दा बढी भाषाहरूमा धेरै स्रोतहरूबाट क्र्याङ्क र स्क्रैप गर्न दिन्छ. डेटा अफलाइन प्रयोगका लागि तपाईको हार्ड ड्राइवमा सुरक्षित वा डाउनलोड गर्न सकिन्छ. तपाइँ समीक्षा वेबसाइटहरू, छलफल फोरमहरू, सोशल मिडिया साइटहरू र समाचार आउटलेटहरू यो उपकरणको साथमा लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ. एक शक्तिशाली क्रलरको रूपमा प्रोप्प्ट क्लाउड कार्यहरू र नियमित रूपमा तपाईंको वेब पेजहरू राम्रो खोज इन्जिन रेटिङका ​​लागि सूचकांक गर्दछ.
पार्सहेब लाइब्रेरी द्वारा डिबगक्स, इंक. यो सबैभन्दा राम्रो, शक्तिशाली र प्रसिद्ध वेब स्क्रैपिंग सेवा हो. गतिशील साइटहरू पढ्न योग्य र स्केलेबल योग्य जानकारीमा यो क्रोम एक्सटेन्सन प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ. प्रोग्रामर र विकासकर्ताहरूको लागि, यो उपकरण डेटाको संरचनामा पूर्ण नियन्त्रण प्रदान गर्दछ.
WinAutomation को द्वारा लाइसेन्स लाइसेन्स ले सफ्टोमोटिव लिमिटेड. यो एक व्यापक स्वचालन उपकरण हो जसले तपाईंलाई दोहोरो कार्य स्वचालित गर्न अनुमति दिन्छ. यसले डेटा निष्कर्षण गर्दछ, र वेब क्रललाई सजिलो बनाउँछ र सही परिणाम प्रदान गर्दछ. यो यन्त्र अपेक्षाकृत नयाँ छ र धेरै सुविधाहरू छन्: तपाई एक्सेल फाईलमा निकालेको डेटा बचत गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाइँको सजिलोको लागि गुगल ड्राइव. तपाईं XML, RSS र JSON ढाँचामा डेटा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ Source .